विवाह - नारी
जीवनसाथी खोजिदिने एप सार्वजनिक
के तपाई बिहे गर्ने जोडी खोज्दै हुनुहुन्छ ? तपाईं विवाह गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने ‘बिहे नेपाल’ एप उपयोगी हुन सक्दछ । राव सफ्टवेयरले यो एप सार्वजनिक गरेसँगै अविवाहितका लागि सहज हुने भएको छ । सन् २०२१ को नोभेम्बरमा अनौपचारिक रुपमा सुरुवात गरिएको यो एपलाई बिहीबार दरबारमार्गमा औपचारिक रुपमा एक कार्यक्रमका बीच उद्घाटन गरियो । यो एपले समाजमा विवाह र दीर्घकालिन सम्बन्ध चाहनेहरुका लागि एकै ठाउ“मा ल्याउन सहयोग गर्ने संस्थापक श्रद्धा कटुवालले बताइन् । उनका अनुसार आफ्नो इच्छा अनुसार जीवनसाथी खोज्न सहज बनाउनका लागि यो एप सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।कसरी प्रयोग गर्ने ?यो एप आइफोन र एन्ड्रोइड दुवै फोनबाट सञ्चालन गर्न सकिनेछ । प्लेस्टोरमा गएर यो एप डाउनलोड पश्चात व्यक्तिले आफ्नो प्रोफाइल बनाउनु पर्ने हुन्छ । प्रयोगकर्ताले आफ्नो वास्तविकता खुलाउनका लागि नागरिकता वा ड्राइभिङ लाइसेन्स पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । एपमा प्रमाणित र वास्तविक प्रयोगकर्ता प्रमाणित भए हरियो चिन्हले संकेत गर्दछ । त्यसपश्चात सम्भावित जोडीबारे उल्लेख गर्नुपर्दछ । आफूले चाहेको पार्टनरको विषयमा उल्लेख गर्नुपर्छ । त्यसपश्चात भने प्रयोगकर्ताहरु एकअर्कामा कुराकानी गर्न सक्नेछन् । सर्वसाधारणका लागि रजिष्ट्रेशन फि निःशुल्क गरिएको छ भने भिआइपी क्लबमा सदस्यताका लागि ४९ हजार तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
नारी संवाददाता , फाल्गुन १३, २०७८
म्यारिज एनिभर्सरीको ट्रेन्ड
२८ वर्षको उमेरमा विवाह गरेका अमात्यले विवाहको ५० औं वर्ष लाग्दा आफै झस्किएर हाँस्दै भने–अब त बूढो भइएछ, जवानी गएछ । जमुना देवीलाई भने आफ्नो तीन पटक विवाह भएजस्तो लाग्यो । पहिलो विवाह बेल विवाह, दोस्रो १९ वर्षको उमेरमा केशवलालसँग र तेस्रो चाहिँ ५० औं म्यारिज एनिभर्सरीमा ।
प्रकृति दाहाल, असार २६, २०७६
बेहुलाका लागि स्टाइलिङ टिप्स
परिवर्तित समयसँगै सुन्दर तथा आकर्षक देखिने विषयमा बेहुलाहरु पनि पछि छैनन् । अत: बेहुलाका लागि समेत फेसनशैली निकै महत्वपूर्ण भएको छ ।
नारी संवाददाता , मंसिर ८, २०७४
विवाहको व्यवस्थापनका लागि के–के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ?
धेरै फाइदा छन् । केटा वा केटी पक्षले विवाहको जिम्मेवारी पार्टी प्यालेस तथा इभेन्टलाई दिए आफूले कुनै झन्झट व्यहोर्नु पर्दैन । पाहुनालाई के खान दिने, कसरी स्वागत गर्ने भन्ने कुराबाट मुक्त भइन्छ ।
नारी संवाददाता , माघ १२, २०७३
लक्ष्मी भण्डारी थापा, मंसिर ८, २०७३
विवाह बन्धन हो, माया–मोहमा जेलिने मेसो ।
लक्ष्मी भण्डारी थापा, मंसिर ७, २०७३
झरना नहर्की, मंसिर ६, २०७३
एक–अर्काका परिपूरक, जीवनमा नभै नहुने सम्बन्ध ।
सिर्जना दुवाल श्रेष्ठ, मंसिर ६, २०७३
विवाह जीवनको महत्वपूर्ण संस्कार हो
विवाह कुनै पनि समाजका लागि महत्वपूर्ण छ ।
झरना नहर्की, मंसिर ५, २०७३
विवाहबाट अपेक्षा कति ठीक कति बेठीक ?
विवाहबाट कति, किन र कस्तो अपेक्षा राख्नुपर्छ भन्ने प्रश्न जटिल छ । अपेक्षा र आदर्श यति बढी हुन्छ यसलाई दोस्रो पक्षले पूरा गर्न सक्दैन । निराशाबाट जोगिन अपेक्षालाई
नारी संवाददाता , मंसिर ५, २०७३
विवाह सामाजिक सम्बन्ध हो ।
उपासना पाण्डे, मंसिर ४, २०७३